China TUNLAND mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Umsebenzi owomeleleyo onayo yonke indawo yokukhwela
Injini Iicummins F2.8-120 / 130KW
Iindidi zokuqhuba 4 * 4/4 * 2
Ubungakanani ngokubanzi 5310 * 1880 * 1860
Ibhokisi yemiyalezo 5MT / 6AT
I-grille emile okwephiko kunye nokhanyiso lwedayimani yekristale, konke oku kuya kukunika amava ahlukileyo, anomdla wokubona.
Inkqubo eguqukayo exhobileyo ye-TUNLAND inamandla kwaye inokwethenjelwa, ayisiyiyo kuphela yokonga ipetroli kunye nokunciphisa ukungcola, kodwa ikwaqinisekisa uzinzo, ekuvumela ukuba wonwabele ngokupheleleyo umdla kwaye uthathe ngaphaya kwemida.
Ukugcina amafutha ngokugqibeleleyo kunye nokuthembeka, kubandakanya ukukhanya okulula, okuhlangeneyo kunye noyilo lweemodyuli;
Ingqondo yophuhliso lokutsha ngokufanelekileyo nge-VVT ephindwe kabini kunye neevalvu ezine;
Ukusetyenziswa kobuchwepheshe bekhompyuter obuphambili bokulawula;
I-drive-free chain chain kunye nokupasa ngaphezulu kwe-10,000-yeeyure zokuvavanya unyamezelo lwesizwe.
Isakhiwo somzimba esomeleleyo ngamandla sihlangabezana nemigangatho yokungqubana kweC-NCAP 4-Star
Isakhelo sokungqubana kwesakhelo sokungqubana nekholamu yokuqhuba engahambelaniyo, kwicala labakhweli kwicala elinye leebhegi zomoya eziqinisa amabhanti okhuseleko
Inkqubo yesine ye-ABS ye-ABS + ye-EBD. I-axle yangemuva ye-LSD engatyibilikiyo umahluko okhiyekileyo.
Uyilo loMgangatho wamanye amazwe
UTakumi othatha inyathelo lokukhusela ukhuseleko kwinjongo yesiseko ukwenza eyona nto iphambili yokhuseleko, ukusetyenziswa koyilo lomzimba oqinileyo wokukhusela inqanaba eliphezulu lokhuselo lokhuseleko
Isiseko seChassis. Ubuninzi beBanga lokuPhila ngama-60%. I-angle ye-Sideslip engama-40 degree.
Uzinzo Isithuthi sonke sidlula ngokudibeneyo kuvavanyo oluthembekileyo lwe-1.6 yezigidi zeekhilomitha 'zeemeko ezimanyumnyezi, kubandakanya iqondo lobushushu eliphezulu, ukubanda okuphezulu, kunye novavanyo lwethafa kunye novavanyo lwe-67,000 lokunyamezela ukunyamezelwa kukazwelonke.
Ukusebenza ngokugqwesileyo Isantya esiphezulu se-160 km / h Ubuninzi beTower Capacity 2500 Kg Ubuninzi bokulayisha i-1500 Kg